Sawirro:-Garoonka diyaaradaha Baladweyn oo xiran iyo dad barakac hor leh sameeyay – Kismaayo24 News Agency
Sawirro:-Garoonka diyaaradaha Baladweyn oo xiran iyo dad barakac hor leh sameeyay
by admin 8th December 2019 0141
Waxaa wali garoonka diyaaradaha Baladweyne kadib roobab culus oo saacadahii ugu dambeyay ka da’ay magaalada Baladweyne ee goblka Hiiraan sido kala wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada.
Xaafadaha ilaa hada laga barkacay waxaa kamid ah laanta Kutiibo ee xaafad Kooshin, Xaawo Taako, laanta Dhagax jibis iyo meelo kale, Ku dhawaad 1,000 qoys ayaa guryahoodii ka barakacay saacadahii ugu dambeyay.
Dad horay uga barakacay Baladweyne ayaa weli waxaa ay ku sugan yihiin deegaanka Ceel-Jaalle ee duleedka Baladweyne,kuwaas oo aan xaafadahooda dib ugu soo laaban casbi ay ka qabaan in markale Wabiga uu ka fataho Baladweyne.
Qoys ku geeriyooday Guri ku soodumay iyo tacsi loodiray.
Baaq nabadeed oo ka soo baxay kulan ka dhacay Gaalkacyo
Daacishta Soomaaliya oo adeecay Amiirka cusub ee kooxda Daacish loo doortay.
Dawladda Israa’iil Oo Sii Deysay Muhaajiriin Ay Ku Jiraan Soomaali
Wareegto: Wariye samafale c/maalik muuse coldoon oo maanta laga sii daayay xabsiga magaalada hargeysa kadib markii……
Tifaftiraha K24 25th May 2017 25th May 2017